Qormo Waalidka Aad U Anfaceyso:- Sidee Ayaad U Fahmi Laheyd Carruurtaada??!!! | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: October 21, 2015, 9:38 am
Sannadaha iskuulka ka hor waa saddex ilaa lix sanno, carruurtu marka ay ku jiraan waxay ka mid yihiin sannadaha ugu muhiimsan ee carruurta dhinaca jidhka, caadifadda iyo fikirka nolosha.
Wiilku inta aan dugsiga tegin waxa uu ku nool yahay caalam-dagaal ama ka hor imanaya carruurta waqtigaa. Waxay leeyihiin waxyaabo badan oo si la fahmi karo aanay soo bandhigi karayn.
Shanta sannadood ee ugu horreysa wiilku wuxuu u halgamaa sidii uu u noqon lahaa shaqsi noloshiisa gaarka ah leh, oo uma hoggaansamo amarrada dadka ka waaweyn.
Muhiimadda ugu horreysa ee ka horimanaysa qoyska inanka ay dhaleen marxaladda iskuulka intaanu tegin waa sidii loo bari lahaa habkii uu ula dhaqmi lahaa caalamkiisa cusub iyo gebi ahaanba dadkii uu kula noolaan lahaa caalamka cusub.
Waxa loo baahan yahay carruurtu inta ay yar yihiin in la baro wanaagga iyo wadiiqooyinka toosan, iyada oo caqligooda loo soo dhaadhacayo, waxaan marna habboonayn in carruurta la iskaga qayliyo ama la dhirbaaxo, maxaa yeelay, waxay dhaliyaan in ay mashaakil, cuqdad iyo wax kasta ay mustaqbalka ka baqaan.
Carruurtu marka ay yar yihiin waxa ay la mid yihiin Philosepher-ka oo wax kasta xaqiiqdooda doon-doona, carruurtuna waa sidaas oo kale oo wax kasta ayey waalidiintooda weydiiyaan.
Haddaba, waxa habboon in aanay waalidiintu dhibsan oo ay weliba tusaalooyin u soo qaataan marka ay arrin u iftiiminayaan, waxa ka sii fiican waalidiinta oo noqda kuwo aqoon leh ama is-dhisa, maxaa yeelay, qofka baahan qayrkii waxba uma gudbin karo, oo hooyada waxa looga baahan yahay inanteeda hadba marxaladda ay ku jirto in ay la socoto, kuwa ku soo fool lehna u sii carbiso, oo aanay la yaab iyo naxdin ku noqon inanta. Sida oo kale, aabbahu waa in uu wiilkiisa saaxiib ka dhigtaa oo uu ku abuuraa inta uu yar yahay kalsooni uu yool kasta ku gaadhi karo.